8.1.1 Sahan-tsoratra - Geofumadas
Ny zavatra misy lahatsoratra dia afaka manome sanda izay miankina amin'ny sary. Ity endri-javatra ity dia antsoina hoe "Text Fields" ary manana tombony izy ireo fa ny angon-drakitra atrehin'izy ireo dia miankina amin'ny toetoetran'ireo zavatra na ireo tarehimarika ifandraisany, ka azo havaozina raha miova izy ireo. Raha atao amin'ny teny hafa, ohatra, raha mamorona zavatra an-tsoratra isika izay misy faritra izay manolotra faritry ny zoro, dia azo havaozina ny lanjan'ny faritra aseho raha ataontsika izay manitsaka izany. Miaraka amin'ny sahan-dahatsoratra dia azontsika atao ny maneho fampahalalana marobe mifandraika amin'izany, toy ny anaran'ny rakitsoratra sary, ny datin'ny fanontana farany sy ny maro hafa.
Andao hojerentsika ny fomba fiasa tafiditra ao. Araka ny fantatsika, rehefa mamorona lahatsoratra lahatsoratra, isika dia manondro ny fampidirana, ny haavony ary ny zoro faniriana, manomboka manoratra isika. Amin'izany fotoana izany dia afaka manindry ny bokotra havian'ny totozy isika ary mampiasa ny safidy "Ampidiro ..." avy amin'ny lisitry ny toe-javatra. Ny vokatra dia boaty fifampiresahana miaraka amin'ny sehatra rehetra azo atao. Ity misy ohatra iray.
Io fomba iray mety, azo ampiharina, hanangana andian-dahatsoratra miaraka amin'ireo sehatra an-tsoratra. Tsy izany ihany anefa no lalana. Azontsika atao koa ny mampiditra sehatra an-tserasera amin'ny alàlan'ny baiko "Field", izay hanokatra mivantana ny boaty fifampiresahana amin'ny alàlan'ny soatoavina farany amin'ny haavon'ny soratra sy ny fironana. Raha tsy izany, ampiasao ny bokotra "Sion" ao amin'ny vondrona "Data" ao amin'ny tabilao "Manambatra". Na izany aza, ny fomba fiasa dia tsy miovaova.
Ho setrinao, raha hanavao ny salan'ireo sehatra an-tsoratra na mihoatra ny sary, ampiasao ny baikon'ny "Update Field" na ny "Update Fields" ao amin'ny vondrona "Data" vao avy. Ho valin'izany, ny varavarankely amin'ny lisitry ny baiko dia mangataka antsika mba hanondro ny saha izay havaozina.
Tsara homarihina anefa fa afaka manova ny fomba nanatanterahan'i Autocad ny fanavaozana ny saha ianao. Ny variable miova "FIELDEVAL" no mamaritra io fomba io. Ny sanda azo ampiharina sy ny fepetra fanavaozana mifanaraka aminy dia aseho amin'ireto latabatra manaraka ireto:
Ny singa dia voatahiry ho doka binary mampiasa ny totalin'ireto sanda manaraka ireto:
1 Updated rehefa nisokatra
2 Updated rehefa mamonjy
4 Updated rehefa manoratra
8 Updated rehefa mampiasa ETRANSMIT
16 Updated rehefa mamerina indray
31 vaovao farany
Ary farany, ny saha miaraka amin'ny daty dia tokony havaozina ara-dalàna foana, na inona na inona ny hasarobidin'ny "FIELDEVAL".
Previous Post«Previous 8.1 Text amin'ny tsipika
Next Post 8.2 Fanitsiana lahatsoratramanaraka »